Xeerarka Guddiga Dugsiga - Degmada Dugsiga Salem -Keizer 24J
Maamulka Guddiga Dugsiga
Ballanqaadka Maamulka BG-1
Muraayadaha Sinnaanta BG-2
BG-3 Sharaxa Shaqada Guddiga
Xeerka Anshaxa Xubnaha BG-4
BG-5 Xubinta Guddiga Khilaafka Danta
Habka BG-6 ee Wax looga Qabanayo Xadgudubyada Xubinta Guddiga
BG-7 Qaabka Xukunka
Doorka Guddoomiyaha BG-9
BG-10 Qorsheynta Agenda
Hawlaha Guddiga BG-11
Doorka BG-12 ee Guddiga Miisaaniyadda (Ingiriis)
Doorka BG-12 ee Guddiga Miisaaniyadda (Isbaanish)
Isku-Darka Ka-dhaafitaanka Canshuurta BG-13
BSL-1 Iskuxirka Maaraynta Maaraynta Caalamiga ah
BSL-2 Ergada Kormeeraha Guud
BSL-3 Kormeerka Waxqabadka Kormeeraha Guud
Caqabadaha Fulinta Caalamiga ee EL-1
Isbedelka Kormeeraha Degdegga ah ee EL-2
Ardayda Xiriirka EL-3 Beesha Waalidiinta
Xiriirka EL-4 ee Shaqaalaha iyo Tabaruceyaasha
Horumarinta Magdhawga Shaqaalaha EL-5
Qiimaynta Shaqaalaha EL-6
Maamulka Maaliyadda EL-8
Ilaalinta Hantida EL-9
Barnaamijka Waxbarashada EL-11
EL-12 Xeerarka Sharci ahaan Loo Baahan Yahay
Qoraalka Xukunka R-1
R-2 Guulaha Waxbarashada
Guddiga Agaasimayaasha Dugsiyada Dadweynaha Salem-Keizer waxaa ka go'an aragtida:
»Sinnaanta Degmada Dugsiga Salem-Keizer laguma khaldi doono sinnaanta halkaas oo dhammaan ardayda loola dhaqmo si isku mid ah. Sinnaanta waxaa la gaari doonaa marka guulaha ay gaareen ardaydeena taariikh ahaan liidata ay la jaanqaadaan natiijooyinka ardayda dhaqanka ugu weyn, marka kooxaha aan waxtarka lahayn ay kordhiyaan awoodda iyo awoodda, iyo marka caqabadaha hortaagan guusha ardayga la yareeyo ama la tirtiro.
»Ballan -qaadkan micnaheedu waa in guusha ardayga aan la saadaalinaynin horayna aan loo sii cayimin astaamaha sida, laakiin aan ku xaddidnayn, jinsiyadda, asalka qaranka, diinta, naafada, goobta juqraafi, duruufaha dhaqaale, dhaqdhaqaaqa, luqadda hooyo, jihada galmada, aqoonsiga jinsiga,
ama heerka aqoonta marka la soo galo dugsiyadeena.
»Guddigu wuxuu tixgelin doonaa saamaynta isbeddelada la soo jeediyay ay ku yeelan karaan shaqsiyaadka iyo kooxaha aan la adeegin, ee kala duwan, iyo kuwa la faquuqay. Isbeddelada qoondaynta kheyraadka, naqshadeynta, iyo hirgelinta siyaasadaha iyo barnaamijyada ayaa la tixgelin doonaa marka la eego natiijooyinka loo siman yahay.
»Xog ururinta iyo falanqaynta joogtada ah ayaa daaha ka rogi doonta saamaynta qoondaynta kheyraadka, siyaasadaha, iyo barnaamijyadu ku leeyihiin natiijooyin siman.
»Qaado muraayad sinnaan ah oo lagu hago go'aannada ka hor imanaya guddiga;
»Sannad walba dib u eeg siyaasadaha Guddiga, gaar ahaan xaddidaadaha fulinta iyo siyaasadaha natiijooyinka, si loo hubiyo in shaqada Guddigu ay diiradda saarto natiijooyin siman; iyo
»Xaqiiji in bulshooyinka ardaydeena ee aan gaarin natiijooyin la jeclaa lagu daro wada -tashiga maadaama go'aannada la tixgelinayo.
Lens Equity PDF (Ingiriisi)
Lens Equity PDF (Isbaanish)